Milamina hatrany - Gordon Green - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2018-02 > Mitoria tory - Gordon Green
Taona vitsivitsy lasa izay dia tany Harare, Zimbabwe aho, mba hanao lahateny tany am-piangonana. Rehefa avy nijery ny hotely aho, dia nandeha an-tongotra namakivaky ny araben'ny renivohitra be olona. Nahasarika ny masoko ny trano iray tao afovoan-tanàna noho ny fomba ara-javakanto. Naka sary vitsivitsy aho ary tampoka teo dia naheno olona nikiakiaka hoe: “Hey! Hey Hey ianao!" Rehefa nitodika aho, dia nibanjina avy hatrany ny mason’ny miaramila iray tezitra. Nirongo basy izy ary nanodina ahy tamin-katezerana. Avy eo izy dia nanomboka nanindrona ahy tamin'ny moron'ny basy teo amin'ny tratrako ary nikiakiaka tamiko hoe: "Faritra fiarovana ity - fady ny maka sary eto!" Tena taitra aho. Toerana fiarovana eo afovoan-tanàna? Ahoana no nahatonga izany? Nijanona ny olona ary nibanjina anay. Nihenjana ny toe-draharaha, saingy ny mahagaga dia tsy natahotra aho. Niteny moramora aho hoe: “Miala tsiny aho. Tsy nahafantatra aho fa misy faritra fiarovana eto. Tsy haka sary intsony aho. Mbola nitohy ny kiakiaka mahery vaika nataon’ilay miaramila, saingy arakaraka ny nikiakiakany no nampihena ny feoko. Nifona indray aho. Nisy zavatra mahagaga nitranga avy eo. Izy koa dia nampidina tsikelikely ny feony (sy ny basy!), Nanova ny feony, ary nihaino ahy fa tsy nanafika ahy. Fotoana fohy taorian'izay, dia nisy resaka nahafinaritra be izahay, izay niafara tamin'ny natorony ahy ny lalana mankany amin'ny fivarotam-boky teo an-toerana!
Rehefa nandeha aho ary niverina tany amin’ny hotely nisy ahy, dia tonga tao an-tsaiko ny ohabolana iray mahazatra hoe: “Ny famaliana malefaka dia mamono ny fahatezerana.” ( Ohabolana 1.5,1). Tamin’ny alalan’io zava-nitranga hafahafa io no nahitako ny vokatry ny teny feno fahendrena nataon’i Solomona. Tsaroako koa ny nanao vavaka manokana tamin’io maraina io izay hozaraiko aminareo any aoriana any.
Amin'ny kolontsaintsika dia tsy mahazatra ny manome valiny malefaka - fa ny mifanohitra amin'izany. Voatosika isika mba “mamoaka ny fihetseham-pontsika” sy “hilaza izay tsapantsika”. Ny andalan-teny ao amin’ny Baiboly ao amin’ny Ohabolana 15,1 toa mampirisika antsika hiaritra ny zavatra rehetra. Fa ny adala rehetra dia afaka mivazavaza na manompa. Mitaky toetra bebe kokoa ny fitondrana olona tezitra amin'ny fahatoniana sy fahalemem-panahy. Izany dia momba ny fanahafana an’i Kristy eo amin’ny fiainantsika andavanandro (1. Johannes 4,17). Tsy mora kokoa ve ny miteny noho ny manao izany? Nianatra aho (ary mbola mianatra!) Misy lesona sarobidy avy amin'ny fifampiraharahana amin'ny olona tezitra sy ny fampiasana valiny malefaka.
Alao kely ilay vola miaraka amin'ilay vola madinika mitovy
Tsy izany ve rehefa mifamaly amin'ny olona ianao fa ny iray kosa hiezaka hiady? Raha manisy hevitra maranitra ny mpifaninana dia te-hanongotra azy isika. Raha kiakiaka izy na hierona, dia hitomany foana isika raha azo atao. Samy te-hanana ny teny farany, ny tsirairay, te-hitifitra farany, na namely tampoka farany. Fa raha manintona ny basintsika fotsiny isika ary tsy manandrana manaporofo amin'ny hafa fa diso izy fa tsy masiaka, dia aleo vetivety foana kosa ny iray hafa. Betsaka ny fifamaliana mety hafanaina na hanaratsiana azy ireo kokoa noho ny karazana valinteny omentsika.
Nametraka fahatezerana diso
Nianatra koa aho fa rehefa toa misy olona tezitra ato amintsika dia tsy zavatra izay eritreretintsika foana. Ilay mpamily adala izay nanapaka anao androany dia tsy nifoha tamin'ity maraina ity noho ny fikasana handroaka anao amin'ny lalana! Tsy fantany akory ianao fa mahalala ny vadiny ary tezitra aminy. Fantatra toy ny teo amin'ny alehany ianao! Ny hamafin'ny hatezerana dia matetika tsy mitovy amin'ny hevitry ny hetsika nahatonga azy. Ny fahatsapan-tena dia soloina fahatezerana, fahasosorana, fahakiviana ary fankahalana ny olona diso. Izany no antony hiatrehantsika mpamily mahery vaika iray eny an-dàlana, mpanjifa tsy manara-penitra ao anaty kaontim-bola na lehiben'ny mpitsikilo. Tsy ilay olona adala aminao izany, ka aza maka manokana ny hatezerany!
Araka ny fiheveran'ny olona azy, dia toy izany ihany izy
Raha te hamaly ny olona tezitra amin’ny valin-teny malefaka isika, dia tsy maintsy ho marina aloha ny fihetsiky ny fo. Na ho ela na ho haingana, ny eritreritsika dia matetika hita taratra amin'ny tenintsika sy ny fitondran-tenantsika. Ny Bokin’ny Ohabolana dia mampianatra antsika fa “ny fon’ny hendry dia mahay miteny.” ( Ohabolana 1 Kor.6,23). Toy ny rano siny avy amin’ny fantsakana, ka ny lela no maka izay ao am-po ka mamoaka izany. Raha madio ny loharano, dia toy izany koa izay lazain'ny lela. Rehefa voaloto dia miteny maloto koa ny lela. Rehefa voaloton’ny eritreri-dratsy sy feno hatezerana ny saintsika, dia ho henjana sy feno herisetra ary valifaty ny fihetsiky ny lohalika manoloana ny olona tezitra. Mariho ilay fitenenana hoe: “Ny famaliana malefaka dia mamono ny fahatezerana; fa ny teny maharary mahatezitra” (Ohabolana 15,1). Ataovy anatiny izany. Hoy i Solomona: “Tsarovy mandrakariva izany, ka ataovy ao am-ponao. Fa izay mahita azy dia mamelona sy manasitrana ny tenany rehetra » (Ohab 4,21-22 Fandikan-teny Genève Vaovao).
Isaky ny sendra olona tezitra isika dia misafidy ny fihetsiktsika amin'izy ireo. Na izany aza, tsy azontsika atao ny manandrana manao izany amin'ny tenantsika sy manao zavatra mifanaraka amin'izany. Io no mitondra ahy amin'ny fivavahako voalaza etsy ambony: «Ray ô, apetraho ao an-tsaiko ny fisainanao. Apetraho eo amin'ny lelako ny teninao mba ho tonga teniko ny teninao. Amin'ny fahasoavanao no ampio aho anio hitovy amin'i Jesosy ho an'ny hafa. » Mipoitra eo amin'ny fiainantsika ny olona tezitra rehefa tsy ampoizintsika indrindra. Miomàna.